Qalabka tamarta korontada ku shaqeeya ee tamarta? Ku shaqee Energy Energy
Home > Maalgelinta ECO Funding for Installers
Energy Energy waxay ku siin doontaa lacagaha ECO-da
Waxaad iska diiwaan gelisaa joornaalka warbixinta ee ECO
Waxaan kaa caawin karnaa inaan ku siino faa'iido tartan tartiib tartiib ah ilaa heerka ugu sareeya ee maalgelinta.
Maalgelinta ECO waa dhib badan tahay, laakiin Maalgalinta Tamarta ayaa kugula shaqeyn doonta hal mid si ku saleysan si loo hubiyo inaad si buuxda u fahamto warqadaha iyo shuruudaha aruurinta caddaynta si markaa sheegashadaada dhaqaale u socoto si habboon. Tani waxay yaraynaysaa maamulka iyo dedejinta lacagta.
Waanu sharxi doonaa wax walba oo ku saabsan ECO iyo shuruucda la xidhiidha marka la shaqeyn karo iyo meelaha ay ka mid yihiin.
Maalgelinteena ECO waxaa lagu bixiyaa £ per tonna oo loogu talagalay CERO iyo CSCO ama qiimo dhimis kharash ah oo loogu talagalay HHCRO (eeg boggayaga 'About ECO') si sharaxaad dheeraad ah looga bixiyo buug-yarahan).
Si loo ogaado heerarka maalgelinta ee qalab gaar ah, marka hore waxaad u baahan doontaa inaad fiirisid Co2 ama dhibcaha qiimaha laga soo qaado xisaabta loo yaqaan 'score spread halkan.